Dhismaha Ganacsiga - Guangzhou Airwoods Environment Technology Co., Ltd.
Dhismooyinka Ganacsiga Xalka HVAC
Qeybta dhismaha ganacsiga, kuleylka iyo qaboojinta waxtarka leh kaliya maahan furaha abuuritaanka shaqaale iyo jawi macaamiisha u roon, laakiin sidoo kale in la ilaaliyo qarashyada lagu shaqeynayo. Hadday ahaan lahayd hudheelada, xafiisyada, dukaammada waaweyn ama dhismayaasha kale ee ganacsiga dadweynuhu waxay u baahan yihiin in la hubiyo xaddiga kuleylka ama qaybinta qaboojinta, iyo sidoo kale ilaalinta tayada hawada wanaagsan. Airwoods waxay fahamsan tahay baahiyaha gaarka ah ee dhismaha ganacsiga waxayna u habeyn kartaa xalka HVAC waxkastoo qaabeyn, cabir ama miisaaniyad ah.
Shuruudaha HVAC ee Dhismaha Ganacsiga
Dhismayaasha xafiisyada iyo meelaha tafaariiqda waxaa laga heli karaa dhismayaal noocyo iyo qaabab kala duwan leh, mid walbana wuxuu leeyahay caqabado u gaar ah marka ay timaado naqshadeynta iyo rakibidda HVAC. Ujeedada koowaad ee goobaha tafaariiqda badankood waa in la jaangooyo lana ilaaliyo heerkulka raaxada leh ee macaamiisha soo galaya dukaanka, goobta tafaariiqda oo aad u kulul ama aad u qabow waxay soo bandhigi kartaa jahwareer dadka wax iibsanaya. Marka laga hadlayo dhismaha xafiiska, cabirka, qaabeynta, tirada xafiisyada / shaqaalaha, iyo xitaa da'da dhismaha waa inay miisaamaan isla'egta. Tayada hawada gudaha sidoo kale waa qodob muhiim ah oo laga fiirsado. Shaandhaynta saxda ah iyo hawo siinta ayaa muhiim u ah ka hortagga urta iyo ilaalinta caafimaadka neefsashada ee macaamiisha iyo shaqaalaha. Goobaha ganacsiga qaarkood waxay u baahan karaan 24-7 nidaaminta heerkulka guud ahaan xarunta si loo ilaaliyo isticmaalka tamarta inta lagu jiro waqtiyada meelaha aan la qabsan.
Waxaan bixinnaa nidaamyo HVAC cusub, hufan, lagu kalsoonaan karo si loo daboolo tayada hawada gudaha. Sidoo kale dabacsanaanta, iyo heerarka dhawaqa oo hooseeya ee looga baahan yahay dhismayaasha xafiiska iyo meelaha tafaariiqda, halkaasoo raaxada iyo wax soosaarku mudnaanta leeyihiin. Naqshadeynta nidaamka HVAC, waxaan tixgelineynaa arrimo sida cabirka goobta, kaabayaasha / qalabka hadda jira, iyo tirada xafiisyada ama qolalka shaqsi ahaan loo nidaaminayo. Waxaan injineer u noqon doonaa xalka loo qaabeeyey si loo bixiyo waxqabadka ugu sarreeya iyadoo la ilaalinayo kharashaadka isticmaalka tamarta. Waxaan sidoo kale la shaqeyn karnaa macaamiisheenna si aan uga caawino inay la kulmaan heerarka tayada hawada gudaha ee adag. Haddii macaamiisha ay doorbidaan inay kululeeyaan ama ay qaboojiyaan booska kaliya inta lagu jiro saacadaha shaqada, waxaan lacag kuugu keydin karnaa biilashaada tamarta adoo siinaya nidaam xakameyn caqli leh si ay kaaga caawiso inaad otomaatiga jadwalka kululeynta iyo qaboojinta ee xaruntaada, xitaa dayactirka heerkulka kala duwan ee qolalka kala duwan
Marka ay timaado HVAC macaamiisheenna tafaariiqda ganacsiga, shaqo aan aad u weyneyn, aad u yar ama aad u adag. In kabadan 10 sano oo khibrad ah, Airwoods waxay dhistay sumcad hogaamiye warshad siinta xalalka HVAC loo habeeyay ee ganacsiyada kaladuwan.
Makhaayada Dubai DX Coil AHU
Mongolia IMAX Shineemo
Filibiin Nex Tower AHU
Telford, UK Restaurant AHU